IiRanger Pro Archives- Ilungelo laseMelika lokwazi
Uvavanyo lokuQala lweCancer Monsanto oluqhubekayo
ezaposwa ngomhla Julayi 10, 2018 by USusan Lang
Amabango omthetho abalulekileyo eMonsanto efihliweyo Umngcipheko weCancer weedkiller iminyaka elishumi, nguCarey Gillam kwi Guardian
Ukukhethwa kweJury yokuqala ye-Monsanto Roundup Ibhlog kaCarey Gillam
Vumela idabi liqale. Iingxelo zokuvula zicwangciselwe uMvulo kwi esemthethweni esemthethweni Ityala lokuba okokuqala libeka iMonsanto kunye ne-Roundup herbicide kwityala malunga nezityholo zokuba umbulali wenkcitho osetyenziswa kakhulu kunokubangela umhlaza.
UDewayne “Lee” Johnson, umgcini wezikolo waseSan Francisco owayesebenzisa uhlobo lweRoundup rhoqo emsebenzini wakhe, uya kujongana nembewu yehlabathi kunye nesigebenga semichiza kwityala ekulindeleke ukuba linwenwe ngo-Agasti. UJohnson unethemba lokuqinisekisa i-jury ukuba iMonsanto, eyinyanga ephelileyo yaba yinkxaso-mali yeBayer AG, unetyala kwi-non-Hodgkin lymphoma abathi oogqirha bamshiye iiveki okanye iinyanga ezishiyekileyo ukuba aphile.
Amacebo omdlalo wenkundla oza kwenzeka kwiveki ephelileyo kaJuni njengoko ukhetho lwejaji luye lwaqhubeka iintsuku, kunye neMonsanto ibanga inkanuko ebanzi phakathi kwabaza kuba lijaji. Inani lamalungu echibi lejaji, Igqwetha likaMonsanto lathi, ityhilwe kwiphepha lemibuzo lejaji ukuba bayayijonga iMonsanto "njengobubi." Abanye bade bathi bakholelwa ukuba inkampani "ibulele abantu," igqwetha laseMonsanto laxelela iJaji yeNkundla ePhakamileyo yaseSan Francisco uSuzanne Bolanos.
Amagqwetha kaMonsanto akhankanya imiba efanayo xa befuna ukuphelisa ukuxoxwa kwetyala ngetyala, exelela ijaji ukuba mayingavumeli iikhamera zeendaba ukuba zibukele umnyhadala ngenxa yokuba ukwazisa kuya "kudala umngcipheko omkhulu wokhuseleko" kubasebenzi bakaMonsanto kunye namagqwetha ekujoliswe kuwo "Izoyikiso ezininzi kunye nonxibelelwano oluphazamisayo," ezinxulumene nokumangalelwa. UMonsanto uthe abasebenzi bafumene iifowuni ezisongelayo kunye neeposikhadi ezothusayo ezithunyelwa emakhayeni abo. Iposikhadi enye ibonise ukakayi kunye neethambo ezinqamlezileyo kunye nefoto yomamkeli, UMonsanto uthe kwinkundla yamatyala.
iJaji UBolanos wagweba ukuba ezinye iinxalenye zetyala ziya kuvunyelwa ukuba zisasazwe, kubandakanya ukuvula iingxelo, ukuvala iingxoxo kunye nokubhengezwa kwesigwebo. Ityala kulindeleke ukuba lilandelwe ngokusondeleyo ngabantu kwihlabathi liphela; iindaba zeFrance I-Agence France Presse uphakathi kwemithombo yeendaba efuna imvume yokugubungela ityala.
Iingxoxo ezishushu malunga nokukhuselwa kwe-Roundup kunye nesithako esisebenzayo se-glyphosate siye sajikeleza umhlaba iminyaka. Ukuxhalaba kuphakanyiswe emva kokuba amaxwebhu angaphakathi eMonsanto avele ngokufunyanwa kwenkundla, ebonisa iingxoxo phakathi kwabasebenzi baseMonsanto malunga "nesiporho" ngokubhala amaphepha athile enzululwazi ukunceda ekulawuleni uluvo noluntu malunga neemveliso zeMonsanto.
Uninzi lwezo rekhodi zenkampani yangaphakathi kulindeleke ukuba zibe yinxalenye ephambili yetyala likaJohnson. Amagqwetha kaJohnson athi banobungqina bokuba iMonsanto kudala yazi ukuba i-glyphosate-based herbicides enje ngeRoundup ibangelwa yi-carcinogenic kwaye ilufihlile olo lwazi kubathengi nakulawulo. Batyhola uMonsanto usebenzise irekhodi lenzululwazi kunye novavanyo lolawulo lwe-glyphosate ukuze kukhuselwe ingeniso enxulumene ne-glyphosate. UMonsanto wayebazi ubungozi kwaye "wenza izigqibo zokungazi kuyila ngokutsha, ukulumkisa okanye ukwazisa uluntu olungalindelekanga," ityala likaJohnson amabango.
Ukuba banakho ukweyisela ijaji kwezi zityholo, amagqwetha athi aceba ukufuna “amakhulu ezigidi zeedola”.
Isimangalo sikaJohnson nxamnye neMonsanto simenza omnye wabamangali abangama-4,000 owamangalela inkampani emva kwe-Arhente yaMazwe ngaMazwe yoPhando ngomhlaza (IARC) echaza i-glyphosate njenge Isidumbu somntu ngo-Matshi 2015. Ulwahlulo lwe-IARC lwalusekwe kuphononongo olungaphezulu kweshumi leminyaka lupapashiwe, olwaphononongwa ngoontanga kwizifundo zesayensi ezihlalutya i-glyphosate kunye ne-glyphosate-based herbicides. Ityala likaJohnson lelokuqala ukuya enkundleni. Enye icwangciselwe ukuvavanywa ngo-Okthobha eSt. Louis, eMissouri.
UMonsanto uthi akukho sizathu sokwenza naliphi na ibango, kwaye iqinisekisa ukuba inamashumi eminyaka yeziphumo zokufumana ukhuseleko kunye nezifundo zophando ezingamakhulu ukubuyisela ukuzikhusela kwayo. "IGlyphosate lolona vavanyo luvavanyiweyo kwimbali," utshilo uMonsanto kwisishwankathelo setyala lakhe.
Inkampani ithi iceba ukwazisa ubungqina beengcali obubonisa ukuba inzululwazi iqinile kwicala layo- "umzimba wonke woncwadi we-epidemiology awubonisi mbutho we-causal association" phakathi kwe-glyphosate-based herbicides kunye ne-non-Hodgkin lymphoma, inkampani ithi. Kananjalo, isiseko sedatha sokuvavanya izilwanyana "sihambelana kakhulu ne-glyphosate engeyiyo i-carcinogen yomntu," ngokweMonsanto.
Amagqwetha enkampani nawo acwangcise ukubonisa ukuba ukubonakaliswa kukaJohnson kwakuncinci, kwaye ngokukodwa, ukuba ukukhula kohlobo lomhlaza wakhe- isifo esibizwa ngokuba yi-mycosis fungoides esibangela izilonda kulusu- kuthatha iminyaka emininzi ukubumba kwaye ngekhe kuphuhle kwixesha elifutshane. phakathi kokuvezwa kukaJohnson kunye nokufumanisa isifo.
Amagqwetha kaMonsanto phikisana kwinkundla Ukuba amabango kaJohnson abuthathaka kakhulu ijaji kufuneka iyalele ijaji ukuba ibonelele ngesigwebo esiyalelweyo kuMonsanto.
Kodwa abameli bakaJohnson baceba ukuxelela amalungu ejaji ukuba uJohnson waqala ukuvela irhashalala kungekudala emva kokuba ebhujiswe ngempazamo kwiMonsanto glyphosate-based herbicide ebizwa ngokuba yiRanger Pro. Wabona irhashalala-eyajika yaba zizilonda emva koko yahlasela i-lymph node-iya isiba mandundu emva kokuba esebenzise umchiza, owawusoloko uphatha amabala esikolo. Abameli bakaJohnson baceba ukuxelela abagwebi ukuba uJohnson wayekhathazekile kangangokuba iyeza lokubulala ukhula lalinetyala lokuba wabiza iiofisi zikaMonsanto kunye nenombolo yomnxeba enetyhefu edweliswe kwileyibhile yeherbicide. Abasebenzi baseMonsanto babhala ukufikelela kwakhe kunye neenkxalabo zakhe, amaxwebhu angaphakathi eMonsanto abonisa. Kodwa nasemva kolwahlulo lwe-IARC lwe-glyphosate njenge-carcinogen enokwenzeka, uMonsanto akazange amazise ngomngcipheko, ngokobungqina obuzakuboniswa kulingo.
Njengenxalenye yetyala labo, amagqwetha kaJohnson anenjongo yoku bonisa ukufakwa kwevidiyo I-10 yangaphambili okanye yangoku yabasebenzi beMonsanto, kunye negosa langaphambili leArhente yoKhuselo lokusiNgqongileyo uJess Rowland, ubudlelwane babo neMonsanto buye babangela izityholo zobuqhophololo kunye uphando oluvela kwiOfisi yoMhloli Jikelele ye-EPA. Baza kubiza ukuma kukaJohnson ngokwakhe, unkosikazi wakhe, oogqirha bakhe, kunye noososayensi abaliqela njengamangqina aziingcali.
The Uluhlu lwamangqina eMonsanto kubandakanya amangqina ali-11 aziingcali aza kunika ubungqina bobabini malunga nemfuneko yokutshabalalisa ukhula, kubandakanya i-glyphosate-based herbicides; uncwadi oluthile lwezenzululwazi; Uhlobo lommangali lomhlaza kunye nezizathu ezinokubakho; kunye nobunye ubungqina bokuba uMonsanto uthi uyazidelela izibango zikaJohnson.
Amagqwetha kaJohnson azakuqala iingxelo zokuvula ngoMvulo, kwaye baveze ukuba ingcaciso yokuqala yamatyala abo kwijaji iya kuthatha iiyure eziyi-1-1 / 2. Amagqwetha kaMonsanto axelele inkundla ukuba balindele ukuba ingxelo yabo yokuvula ithathe malunga ne-1-1 / 4 iiyure.
Eli bali livela kuqala EcoWeb.
Ukutya kwengqondo, Pesticides Bayer, umhlaza, EPA, glyphosate, IARC, UJess Rowland, IMonsanto, i-non-Hodgkin lymphoma, inambuzane, Ranger Pro, Yisonge yonke